SPM News: Somali 5.13.22
Published May 13, 2022 at 11:25 AM CDT
Musharaxa senate-ka ee U-S Abby Finkenauer ayaa sheegay in dowladda federaalku ay tahay in ay wax badan ka qabato yaraanta halista ah ee caanaha caanaha ee Maraykanka Dhammaadkii Abriil, Finkenauer waxa uu ugu baaqay Madaxweyne Biden in uu u yeedho Sharciga Soo saarista Difaaca.
Finkenauer waa mid ka mid ah saddexda Dimuqraadiyiinta ee ku tartamaya inay la tartamaan Senetarka Jamhuuriga Chuck Grassley ee Doorashada Guud. Grassley ayaa shalay warqad u qoray Maamulka Cuntada iyo Dawooyinka isagoo sheegay in uu dalbanayo jawaabo ku saabsan yaraanta caanaha caanaha.
Xitaa markii COVID-19 uu si degdeg ah ugu faafay shaqaalaha dhexdooda, warshadaha hilibku waxay si dhow ula shaqeeyeen xilalka siyaasadeed ee maamulka Trump si ay meesha uga saaraan xannibaadaha caafimaadka oo ay u sii furnaadaan kawaannada. Taasi waa sida lagu sheegay warbixin cusub oo Congress-ka.
Warbixinta maanta la soo saaray ayaa lagu sheegay in shirkadaha hilibka ay ku riixeen inay dhirtooda u furnaadaan heerka ugu sarreeya ee masiibada, inkastoo ay ogaayeen in shaqaaluhu ay halis sare ku jiraan.
Si kastaba ha ahaatee, kooxda ganacsiga ee Machadka Hilibka Waqooyiga Ameerika ayaa sheegay in warbixintu ay leexinayso runta oo ay iska indha tirto tillaabooyinka ay shirkaduhu qaadeen si ay u difaacaan shaqaalaha.
Xaaladda abaartu way sii raynaysay usbuucan, taas oo ay ugu wacan tahay roobabkii waqtiga ku da'ay ee da'ay labadii toddobaad ee la soo dhaafay. Sida laga soo xigtay Kormeeraha Abaaraha ee ugu dambeeyay ee ay maanta soo saartay Jaamacadda Nebraska-Lincoln, qaddarka abaarta daran iyo kuwa daran ayaa hoos u dhacay todobaadkii labaad oo isku xigta.
Ku dhawaad 100 qof ayaa isugu soo baxay bartamaha magaalada Sioux galabnimadii maanta si ay u wacyi galiyaan arrinta la la’yahay ee la dilay dumarka iyo qaraabada asaliga ah.
Machadka Qaranka ee Cadaalada ayaa sheegay in afar ka mid ah shantii dumar ah ee u dhalatay ay la kulmi doonaan rabshad inta ay nool yihiin.
Hogaamiyaasha fulinta sharciga ee maxalliga ah ayaa ku biiray kooxda, oo uu ku jiro Taliyaha Bilayska Magaalada Sioux Rex Mueller. Kooxdan ayaa ka soo kicitimay afaafka hore ee xabsiga degmada Woodbury, waxayna tageen xarunta madxafka dadweynaha oo caawa loo ballansanaa munaasabad kale.
SPM News: Somali SomaliLocal
See stories by Mulki Osman
Wararka Siouxland ee Isbaanishka